Ra'isal wasaaraha Jarmalka oo sheegtay in aan caqabadi hor ool wadahadallada UK, Midowga Yurub - BBC Somali
Ra'isal wasaaraha Jarmalka oo sheegtay in aan caqabadi hor ool wadahadallada UK, Midowga Yurub
Image caption Agela Merkel waxay sheegtay in Midowga Yurub diyaar u yahay wadahadallada
Ra'isal wasaaraha Jarmalka, Angela Merkel, ayaa sheegtay in aanay u muuqan caqabado hor yaal wadahadalka ay u ballansanyihiin iyada iyo Theresa May, inkasta oo ay ku guul darraysatay in ay aqlabiyad ka hesho doorashadii Khamiistii ka dhacday dalka Ingiriiska.
Ra'isal wasaaraha Jarmalku waxay sheegtay in ay rumaysantahay in Britain ku dhamayn doonto arimaha looga baahanyhay mudada loo cayimay, maadaama oo bay tidhi Midowga Yurub-na diyaar yahay.
Merkel waxay intaa ku dartay in ay rajo ka qabto in Ingiriisku sii ahaan doono dal ay is kaashadaan marka la soo gabagabeeyo wadahadallada [ka bixitaanka Midowga Yurub] ee la filayo in ay bilaabmaan 19 Juun.
Waa hadalkeedii u horeeyey ee ay kaga hadasho arimahan tan iyo markii [natiijada doorashadu soo baxday] ee ay cadaaday in xisbiga Conservative-ka May uu waayey 13 kursi oo uu hore u haystay.
Guul darrada xisbiga Conservative-ka ku habsatay waxay keentay in ay waayaan sideed kursi oo u suurto gelin lahaa in ay aqlabiyad buuxda ku yeeshaan baarlamanka, waxaanay arrintaasi dhalisay hubanti la'aan soo foodsaartay wadahadallada Ingiriisku la gelayo Midowga Yurub.
May ayaa ku baaqday doorashooyinkan xiligoodii laga soo hor mariyey si ay ugu suurto gasho in ay hesho taageero buuxda oo shacabku siiyo oo ay ku taageerayaan aragtideeda ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub.